Multiple Sclerosis: hukama huripo pakati pehutungamiriri hwemabasa uye ndangariro yenguva refu yemazwi | Kudzidziswa Kwekuziva
Isu tambotaura pane dzinoverengeka nguva zvinogoneka zvinetso zvekuziva mune akawanda sclerosis zvinogona kunetsa memory and the mabasa makuru. Isu takaona zvakare kuti izvi zvinoremadza sei, kana zviripo, zvakare zvinowanisa kubatana zvinonetsa muhupenyu hwezuva nezuva, pamwe neiyo kugona kutyaira et al kuchengetedza basa; isu zvakare takaona kuti kuvapo kwezvinetso zvekuziva kwakadaro kunogona sei fungidzira kufambira mberi kwechirwere and the kutendeuka kubva pakudzokorora kuregererazve kuenda mberi.
Nekutsvagisa kwakabudiswa muna 2019, Pitteri uye vanobatana vakatsvaga kuvhenekera hukama pakati pendangariro nemabasa makuru mune mamiriro eiyo multiple sclerosis. Mukudzidza kwavo, ivo vaongorori vakaisa zvinangwa zviviri:
Wongorora basa re mabasa makuru mukutaura kwekutaura kushomeka kunowanzoitika muvanhu vane multiple sclerosis
Nzwisisa hukama uhwu muchiedza chekushanduka kwehuropi (cortical ukobvu kumatunhu anoenderana nekuyeuka uye kumatunhu ane hukama nemabasa makuru).
Kuti uwane zvinangwa zvatsanangurwa, boka revarwere rakapinda Verbal ndangariro bvunzo rakatorwa kubva Ipfupi uye inodzokororwa Bhatiri reNeuropsychological Tied Rao's Sarudzo Yekuyeuchidza Muedzo, muedzo wakafanana neBuschke-Fuld's Verbal Supra-Span Kudzidza (Heano rondedzero pfupi).
Vanhu vamwe chete ivavo vakaiswa pasi uye bvunzo dzemabasa makuru: iyo Stroop Test, iyo Alternate Fluence Test uye Yakagadziridzwa shanu Pfungwa Bvunzo (bvunzo dzese dziripo zvinotsanangurwa apa).
Mukuwedzera, kumurwere wega wega, kuburikidza nemagineti yekufungidzira, ivo vaive tsvaga shanduko dzehuropi zvose zviri zviviri grey nenyaya chena inofungidzirwa kuti yakabatana nekuyeuka uye kushomeka kwebasa kushomeka.
Kuenzaniswa nemabasa ekutonga, iyo Alternate Fluidity Test yakarongedzwa zvakanyanya kuwanda muzvikwangwani zvekuyeuka, kuenda kusvika pakuda kutsanangura chikamu musiyano uripakati pe 38% kusvika makumi mana nemasere pamakumi emakumi emakumi emapimirwo ezvekutaura mnemonic bvunzo.
Kuenzaniswa ne kukora cortical, shanduko dzorudyi medial kumberi cortex, yekumusoro kurudyi kumberi gypus, kurudyi nekuruboshwe hippocampus, kurudyi uye kuruboshwe orbital-kumberi cortex uye kurudyi rwemberi danda akatsanangura chikamu musiyano uripo pakati pe45% kusvika 52% mashandiro emabasa echiito ekurangarira.
Unyanzvi hwemashoko ekudzidza saka hunoratidzika kunge huchabatana nekushomeka mumabasa ekutungamira uye kushandurwa kwepfungwa kwepamberi uye kwenguva pfupi.
Idzo yakabuda muongororo iyi inoratidza mukana wekuti mabasa makuru, kunyanya kushanduka, anokanganisa kugona kwemesic, kutsvaga imwe data yekutsigira iyi hypothesis mukushamwaridzana pakati pekushanduka kwechekuita kumberi-kwemhepo nzvimbo nekushomeka kwemazwi.
Izvo zvakakosha kuti usimbise kuti iyo data inouya kubva kutsvagiridzo iyi ndeye chete inogadzirisa uye haibvumidze kusvika pamhedzisiro nezvechikonzero-chinongedzo chinongedzo. Nekudaro, kana mhedziso dzakasvikwa nevanyori (pamwe nekukurumidza kwazvo) dzakasimbiswa nekumwe kutsvagura, zvingave zvine musoro kufunga kuti, pamberi pekushomeka kwememonic, kudzoreredza hakufanirwe kuve kunobva kungori pakurangarira chete asi pamwe zvingave zvakakodzera kuti ubatanidze pamwe nebasa zvakare yakanangana nemabasa makuru.
Multiple sclerosis uye kungwara kushomeka
Iko kungwara kwekushomeka kunofanotaura maitiro ehupamhi sclerosis mushure memakore gumi
Pitteri, M., Dapor, C., Pisani, AI, Castellaro, M., DeLuca, J., Chiaravalloti, N.,… & Calabrese, M. (2019). Kushanda kwehutongi kunokanganisa maitiro ekudzidzira maitiro mune dzakawanda sclerosis varwere: Maitiro ekuzvibata uye ekufungidzira. Chinyorwa cheNeuropsychology.
kushomeka kwekuziva mune akawanda sclerosis, kungwara kushomeka akawanda sclerosis, multiple sclerosis memory, multiple sclerosis, multiple sclerosis uye Executive mabasa
Multiple sclerosis: hukama pakati pemabasa makuru uye ndangariro refu yekutaura2019-12-282020-02-22http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2019/12/memoria-e-funzioni-esecutive.png200px200px